ဒါတွေကို အကုန်သိရင် သင်ချမ်းသာလာလိမ့်မယ်.... - APANNPYAY
/ ဒါတွေကို အကုန်သိရင် သင်ချမ်းသာလာလိမ့်မယ်....
ဒါတွေကို အကုန်သိရင် သင်ချမ်းသာလာလိမ့်မယ်....
သင်သိရင် သင်ချမ်းသာလာလိမ့်မယ် (ပညာပေး)
မြေခွေးတစ်ကောင်ဟာ ကြက်ခြံတစ်ခြံကိုတွေ့တော့ ခြံထဲကိုဝင်ပြီးကြက်ခိုးစားဖို့ ကြံစီတယ်
ဒါပေမဲ့ သူ့ခန္တာကိုယ်က ဝလွန်းတာကြောင့် ခြံထဲကို တိုးဝင်လို့ မရဘူး ဘယ်လိုရှာရှာ တိုးတိုး မရတာနဲ့ အစာငတ်ခံတဲ့ နည်းကိုသုံးပြီး ၃ရက် အငတ်ခံပြီး ကိုယ်လုံးသေးသွားတော့မှ ခြံထဲကို တိုးဝင်လို့ရသွား ရော ..ဒါပေမဲ့ ကြက်တွေ ကိုခိုးစားလို့ ဝပြီး ပြန်ထွက်မယ် လုပ်တော့ ပြန်ဝနေတာနဲ့ ထွက်လို့ မရတော့ပြန်ဘူးဖြစ်နေရော
ဒါနဲ့ နောက်သုံးရက် အစာအငတ်ခံ တော့မှပဲ ကြက်ခြံထဲကပြန်ထွက်လာလို့ ရလာတော့တယ်
နောက်ဆုံးတော့ မြေခွေး လည်းစဉ်းစားမိတယ်
ကိုယ့် ရဲ့တုံးအမှု့ကြောင့် ကိုယ့် အခြေအနေ ကိုကိုယ်ပြောင်းလဲ နေမိတယ် နောက်ဆုံးတော့ဘာ အကျိုးမှလဲ မရှိဘူး ဆိုတာပါပဲ
ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေ ဟာလည်းအတူတူပါပဲ ဘာမှသိပ်မကွာခြားလှပါဘူး
ကျွန်တော်တို့ မွေးဖွားလာတုန်းက ကိုယ်အလွတ် နဲ့ လက်ဗလာမွေးဖွားလာ ကြပြီး ပြန်သွားတဲ့ အချိန်ကျတော့လည်း လက်ဗလာနဲ့ ပဲပြန်သွားကြရတာ ပါ ဘယ်အရာမှသယ်သွားလို့ မရ နိုင်ပါဘူး
ဘယ်သူက မှလည်းရှာဖွေးထားတဲ့ စည်းစိမ်ဥစ္စာ နဲ့ ဂုဏ်ဓန တွေ ကို မသယ်သွားနိုင်ကြဖူးပါဘူး
ကျွန်တော်တို့ နုပျိုငယ်ရွယ်တုန်းအချိန်မှာ ကြိုးစားရုန်းကန်ပြီးငွေ ကို အသဲ အသန်ရှာဖွေ ခဲ့ကြပေမဲ့ အဲ့ဒီပိုက်ဆံတွေ နဲ့ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ ပျိုရွယ်တဲ့ ဘဝတွေ ကိုပြန်ဝယ်လို့ ဘယ်လိုမှ မရ နိုင်ပါဘူး ...ပျော်ရွင်မှု့တွေ ကို ငွေ နဲ့ သွားလဲခဲ့ကြပေမဲ့ အဲ့ငွေ တွေ နဲ့ ပျော်ရွင်မှု့နဲ့ အချိန်တွေကိုပြန်သွားဝယ်လာ လို့ မရ နိုင်ပါဘူး
တစ်ကမ္ဘာ လုံးမှရှိတဲ့ ဥစ္စာပစ္စည်းတွေ နဲ့ လဲ ကိုယ့်ရဲ့ဘဝ ကိုပြန်ဝယ်လို့ မရ နိုင်ပါဘူး
ဒါကြောင့် အလုပ် တဲ့အခါ ဆိုရင် လဲလုပ်ပါ
အနားယူတဲ့အခါ မှာလဲ အနားယူပါ
အလုပ်လုပ်နေရင်းနဲ့ လဲ ဘဝရဲ့ ပျော်ရွင်မှု့လေးတွေ နဲ့ တန်ဖိုးတွေ ကို ရိတ်သိမ်းသွားဖို့ သိတတ်ပါစေ
ကိုယ့်မှာရှိနေတဲ့ တန်ဖိုးကို ရှာတွေ့တတ်ပါစေ
ကိုယ့်မှာရှိနေတဲ့ အချစ်တွေ ကို ထိန်းသိမ်းဂရုစိုက်တတ်ပါစေ
ကုန်းဆုံးနေတဲ့ တစ်ရက်ပြီးတစ်ရက် ကိုပျော်ရွင်မှု့တွေ သာရရှိနေပါစေ
အင်မတန်ခမ်းနားတဲ့ ဈေးကြီး အိမ်ကြီးဖြစ်နေပါစေ သင်လဲ ကုတင် တစ်လုံးတည်းပေါ်မှာပဲ အိပ်ရမှာပါပဲ
ကားအကောင်းစားဈေးကြီး ကြီးနဲ့ ဘယ်လောက်ပဲ ကောင်းနေ မြန်နေ ပါစေ ရန်ကုန် ကားတောထဲ မှာ ညပ်ပြီး ပိတ်ခံ နေရမှာပါပဲ အမြန်မောင်းပြန်ရင်လဲ ဒဏ်ငွေဆောင်ရမှာပါ
ဈေးကြီးတဲ့ အိတ်အကောင်းစားကြီးပဲ ဖြစ်နေပါစေထည့်လို့၇တာကတော့ ပလပ်စတစ်အိပ်သာသာပါပဲ
သူများမိန်းမ ဘယ်လောက်ချောနေပါစေ တစ်နေ့ တော့ ဆံဖြူသွားကျိုး ခါးကိုင်းပြီး အိုမှာအတူတူပါပဲ
သူများယောက်ျား အင်မတန်ချမ်းသာ အရမ်းချမ်းသာနေပါစေ သင့်ကိုသစ္စာရှိရှိချစ်နေတဲ့ ဆင်းရဲ သားယောက်ျားကိုတော့ မမှီနိုင်ပါဘူး
မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာ အတွက် ဖွေ ရှာမနေမိပါစေနဲ့ ဆုပ်ကိုင်ထားနေတဲ့
အတုအယောင်ပျော်ရွင်မှု့တွေကို ပစ်ထားခဲ့လိုက်ပါ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ တကယ်တမ်း ပျော်ရွင်မှု့ အစစ်အမှန်ဆိုတာ နေရာ တိုင်း အချိန်တိုင်းမှာ
ပေါ်ပေါက်နေနိုင်ပါတယ် အကယ်လို့ ကိုယ်ကို ကိုယ်သာ
“ ရောင်ရဲတင်းတိမ် ”တတ်ဖို့ သတိပေးနိုင်ခဲ့မယ် ဆိုရင်ပေါ့ .
သငျသိရငျ သငျခမျြးသာလာလိမျ့မယျ (ပညာပေး)
မွခှေေးတဈကောငျဟာ ကွကျခွံတဈခွံကိုတှတေ့ော့ ခွံထဲကိုဝငျပွီးကွကျခိုးစားဖို့ ကွံစီတယျ
ဒါပမေဲ့ သူ့ခန်တာကိုယျက ဝလှနျးတာကွောငျ့ ခွံထဲကို တိုးဝငျလို့ မရဘူး ဘယျလိုရှာရှာ တိုးတိုး မရတာနဲ့ အစာငတျခံတဲ့ နညျးကိုသုံးပွီး ၃ရကျ အငတျခံပွီး ကိုယျလုံးသေးသှားတော့မှ ခွံထဲကို တိုးဝငျလို့ရသှား ရော ..ဒါပမေဲ့ ကွကျတှေ ကိုခိုးစားလို့ ဝပွီး ပွနျထှကျမယျ လုပျတော့ ပွနျဝနတောနဲ့ ထှကျလို့ မရတော့ပွနျဘူးဖွဈနရေော
ဒါနဲ့ နောကျသုံးရကျ အစာအငတျခံ တော့မှပဲ ကွကျခွံထဲကပွနျထှကျလာလို့ ရလာတော့တယျ
နောကျဆုံးတော့ မွခှေေး လညျးစဉျးစားမိတယျ
ကိုယျ့ ရဲ့တုံးအမှု့ကွောငျ့ ကိုယျ့ အခွအေနေ ကိုကိုယျပွောငျးလဲ နမေိတယျ နောကျဆုံးတော့ဘာ အကြိုးမှလဲ မရှိဘူး ဆိုတာပါပဲ
ကြှနျတျောတို့ဘဝတှေ ဟာလညျးအတူတူပါပဲ ဘာမှသိပျမကှာခွားလှပါဘူး
ကြှနျတျောတို့ မှေးဖှားလာတုနျးက ကိုယျအလှတျ နဲ့ လကျဗလာမှေးဖှားလာ ကွပွီး ပွနျသှားတဲ့ အခြိနျကတြော့လညျး လကျဗလာနဲ့ ပဲပွနျသှားကွရတာ ပါ ဘယျအရာမှသယျသှားလို့ မရ နိုငျပါဘူး
ဘယျသူက မှလညျးရှာဖှေးထားတဲ့ စညျးစိမျဥစ်စာ နဲ့ ဂုဏျဓန တှေ ကို မသယျသှားနိုငျကွဖူးပါဘူး
ကြှနျတျောတို့ နုပြိုငယျရှယျတုနျးအခြိနျမှာ ကွိုးစားရုနျးကနျပွီးငှေ ကို အသဲ အသနျရှာဖှေ ခဲ့ကွပမေဲ့ အဲ့ဒီပိုကျဆံတှေ နဲ့ ကြှနျတျောတို့ ရဲ့ ပြိုရှယျတဲ့ ဘဝတှေ ကိုပွနျဝယျလို့ ဘယျလိုမှ မရ နိုငျပါဘူး ...ပြျောရှငျမှု့တှေ ကို ငှေ နဲ့ သှားလဲခဲ့ကွပမေဲ့ အဲ့ငှေ တှေ နဲ့ ပြျောရှငျမှု့နဲ့ အခြိနျတှကေိုပွနျသှားဝယျလာ လို့ မရ နိုငျပါဘူး
တဈကမ်ဘာ လုံးမှရှိတဲ့ ဥစ်စာပစ်စညျးတှေ နဲ့ လဲ ကိုယျ့ရဲ့ဘဝ ကိုပွနျဝယျလို့ မရ နိုငျပါဘူး
ဒါကွောငျ့ အလုပျ တဲ့အခါ ဆိုရငျ လဲလုပျပါ
အနားယူတဲ့အခါ မှာလဲ အနားယူပါ
အလုပျလုပျနရေငျးနဲ့ လဲ ဘဝရဲ့ ပြျောရှငျမှု့လေးတှေ နဲ့ တနျဖိုးတှေ ကို ရိတျသိမျးသှားဖို့ သိတတျပါစေ
ကိုယျ့မှာရှိနတေဲ့ တနျဖိုးကို ရှာတှတေ့တျပါစေ
ကိုယျ့မှာရှိနတေဲ့ အခဈြတှေ ကို ထိနျးသိမျးဂရုစိုကျတတျပါစေ
ကုနျးဆုံးနတေဲ့ တဈရကျပွီးတဈရကျ ကိုပြျောရှငျမှု့တှေ သာရရှိနပေါစေ
အငျမတနျခမျးနားတဲ့ စြေးကွီး အိမျကွီးဖွဈနပေါစေ သငျလဲ ကုတငျ တဈလုံးတညျးပျေါမှာပဲ အိပျရမှာပါပဲ
ကားအကောငျးစားစြေးကွီး ကွီးနဲ့ ဘယျလောကျပဲ ကောငျးနေ မွနျနေ ပါစေ ရနျကုနျ ကားတောထဲ မှာ ညပျပွီး ပိတျခံ နရေမှာပါပဲ အမွနျမောငျးပွနျရငျလဲ ဒဏျငှဆေောငျရမှာပါ
စြေးကွီးတဲ့ အိတျအကောငျးစားကွီးပဲ ဖွဈနပေါစထေညျ့လို့ရတာကတော့ ပလပျစတဈအိပျသာသာပါပဲ
သူမြားမိနျးမ ဘယျလောကျခြောနပေါစေ တဈနေ့ တော့ ဆံဖွူသှားကြိုး ခါးကိုငျးပွီး အိုမှာအတူတူပါပဲ
သူမြားယောကျြား အငျမတနျခမျြးသာ အရမျးခမျြးသာနပေါစေ သငျ့ကိုသစ်စာရှိရှိခဈြနတေဲ့ ဆငျးရဲ သားယောကျြားကိုတော့ မမှီနိုငျပါဘူး
မဖွဈနိုငျတဲ့အရာ အတှကျ ဖှေ ရှာမနမေိပါစနေဲ့ ဆုပျကိုငျထားနတေဲ့
အတုအယောငျပြျောရှငျမှု့တှကေို ပဈထားခဲ့လိုကျပါ ဘာကွောငျ့လဲ ဆိုတော့ တကယျတမျး ပြျောရှငျမှု့ အစဈအမှနျဆိုတာ နရော တိုငျး အခြိနျတိုငျးမှာ
ပျေါပေါကျနနေိုငျပါတယျ အကယျလို့ ကိုယျကို ကိုယျသာ
“ ရောငျရဲတငျးတိမျ ”တတျဖို့ သတိပေးနိုငျခဲ့မယျ ဆိုရငျပေါ့ .
ဒါတှကေို အကုနျသိရငျ သငျခမျြးသာလာလိမျ့မယျ....